Chateau Chambord kwi yingqele, yingqele ebusika mini, kodwa nangona kunjalo ngokupheleleyo abantu ngomhla we-iholide kwaye iqela efrench horn abadlali. (Ndizakuyenza ukongeza ividiyo ngazo kamva.) Oku kwaba ekhaya Francois mna, kwaye abanye abantu into Leonardo Da Vinci yenzelwe. oko. Igosa incwadi trailer kuba Phil i-valentine ke thriller, Yokuqala Kobuso Janus. Yintoni ukuba kwakukho centuries-elide conspiracy ukuqinisekisa ukuba Nostradamus’ iziprofetho weza inyaniso. Ezinjalo iqela ingaba wield unimaginable amandla ezingaqhelekanga neendlela zobuchwepheshe elizayo yehlabathi. I-abadlali xa isindululo eso.
Olandelayo isiprofetho ngu-sele begin, kwaye ke kukho enye kuphela umntu ngubani onako ukuma Lokuqala Kobuso Janus. Isahluko Omnye Ezibuhlungu Ehlotyeni kwi-Biarritz i-narrator, Canadian umfazi, hopes ukutshintsha yakhe ubomi ngu uyise ukuba Biarritz. Ekubeni lokuphuma a devastating ubudlelwane kunye mentally unstable Dominique, yena izimisele ukwenza entsha abahlobo kunye nokufumana olugqibeleleyo mate. Kodwa kule ehlotyeni resort frequented yi-couples kwaye iintsapho, ezifumanekayo icacile ingaba lonely abantu, kaninzi embittered yi-romanticcomment ukungaphumeleli. Kwaye ukuba ulutsha imvumi Vinnie ithembise ngokungena wobulali society, lowo ihlala i-elusive nani. Xa Vinnie ke umzimba surfaces ngomhla Pointe des Ugqaliso entsha rumors circulate. Kokuba yena ngenene sele a fortune hunter, seducer kwaye blackmailer, okanye nje bathambe, phezu-elinovakalelo umntu, umntu ongaphumelelanga ngothando kwaye friendship. Amapolisa kufuneka ndagqiba kokufa kwakhe kwaba accidental kodwa akuthethi ukuba yonke into ku babulala. Okanye ingaba narrator phezu-reacting. Mhlawumbi loneliness kwaye isolation ndenza yakhe suspicious, kuba uthando ngu njengoko unattainable njengangaphambili, kwaye threatening iileta ezivela Dominique ingaba arriving kunye ukwanda rhoqo Ukumiselwa i-Horn Imimandla Echoes: A Ingoma ka-Roland. A samkele iphenjelelwe yi-Chanson de Roland kwaye kusekelwe screenplay Ingoma ka-Roland. Behamba ukusuka ubudala imali akukho mali, u-Maxwell oodade’ ubomi ingaba malunga ukutshintsha lotshintsho. Ngoku, ngabanye ngabanye, ngamnye kufuneka blaze yakhe kunye umzila ukuba happily-ngonaphakade-emva. Manderley Maxwell sele rhoqo ukuba dependable, nzima-isebenza omnye ngexesha yakhe younger oodade live-A-uluhlu ubomi, courtesy zabo usapho fortune. de ke ngesiquphe, balahleka, eshiya ngasemva a truckload eliyingozi. Ngoku Mandy ngu faced eneenketho ezimbini: dlala perpetual caretaker kuye spoiled nabantakwethu, okanye ekugqibeleni yaphula ngaphandle kwayo predictable routine ngendlela ka-France. Xa Mandy ke boss relocates kuba ehlotyeni, Mandy ingaba ngenene nje orhwebo kwi-d isebenzisa kuba iqhuba errands ngokusebenzisa ezitratweni ka-Cannes de handsome, debonair Girard Fortune Xavier de Malo ret sweeps yakhe ngaphandle yakhe iinyawo yi-ukugcina yakhe ekuweni ngaphandle a cliff. Mandy ke, ehamba phezu zezulu ngaphandle kokuba yena ke abahlala kuyo chic isithunzi kuqala Madame de Malo ret, uzalise kunye uthetho olusezantsi malunga ngesiquphe secretive Xavier ke inxenye yayo disappearance. Kwakhona, Ma Behamba ukusuka ubudala imali akukho mali, u-Maxwell oodade’ ubomi ingaba malunga ukutshintsha lotshintsho. Ngoku, ngabanye ngabanye, ngamnye kufuneka blaze yakhe kunye umzila ukuba happily-ngonaphakade-emva. Behamba ukusuka ubudala imali akukho mali, u-Maxwell oodade’ ubomi ingaba malunga ukutshintsha lotshintsho. Ngoku, ngabanye ngabanye, ngamnye kufuneka blaze yakhe kunye umzila ukuba happily-ngonaphakade-emva. ‘A isifrentshi shepherdess linceda oyingcwele a ehlabathini-famous pop sensation kudlula kwi — afterlife. ‘Leonora ngu renowned ngaphakathi encinane umsebenzi wokufama dolophana ka-Auvergne kuba ekuncedeni ghosts kudlula kwi kwi afterlife. Nangona kunjalo, xa yena ngu ngenye imini greeted ngomoya a kutshanje mntu ubhubhileyo ehlabathini-famous pop sensation, wakhe ihlabathi lakhe clash, ngonaphakade altering le dolophana ke destiny. Ngexesha ucwangciso abantwana ke imveliso ngomhla dolophana ke yonyaka festival, yena ngokuphonononga abemi, abaphilileyo nabafileyo, kwenzeka mimiselo lelabo uyasokola, zonke ngexesha ingxowa-herself zomoya amandla ithetha ntoni ukuba sithande kwaye kuba wamthanda. Oku ividiyo phambi koshicilelo iincwadi kwi-mbasa-ifumana Abancinane Unobuhle IMBALI Travels ukuba abantwana ke nonfiction umboniso incwadi uphawu. Kanjalo ibandakanya trilogy sasenew York City adventures kwaye coloring incwadi ukuba ubandakanya ne-amazwi obulumko ukusuka imbali. Aunt Lucie ngu-a real intlungu kwi-neck. Nangona yena akusebenzi ukuba kanye kanye i-ngcwele xa yena uphilile, ngoku ukuba yena ke lwabafileyo, yena surpasses herself ekwenzeni ubomi bangonwabanga kuba yena nosapho lwakhe. Wakhe itestamente ngu ikhristali cacisa: ukuya kuqokelela ilifa elo, wakhe nephews neentsapho zabo kufuneka i yiya kwincwadi yayo indlu, nto leyo ngokuqinisekileyo palace. Aunt Lucie sele omnye surprise phezulu kwayo sleeve, khetha ka-mad ubutyebi hunt, ankle-nzulu udaka. Wamkelekile lwasemaphandleni France. Yintoni ezithile kukuba yakhe mhlekazi nephews asingawo malunga ukufumana okruqukileyo njengoko baya get ibambe kwi-i-unforgettable adventure kwi-intliziyo Bearn. Kude kangakanani baya kuhamba ukufumana ezandleni zabo kwi-jackpot. Comical kwiimeko, flavorsome yababini kwaye dramatic ajongise ka iziganeko kwenzeka ngokukhawuleza kwaye furious, masterfully orchestrated ngu-bawo Aunt Lucie. I climax ayikwazi kuphela kuba astonishing. Ngaphezu a iphepha-turner, lo wild ride. Legends ka-Astraea — Cupid ke Isalathisi ufumana i-fast-paced, esiza-age epic. Ukuba ungathanda tales na Shandra Izikronike, mysticism ka-Dan Brown stories, okanye kuncwadi legend of Faust. YA ababukeli bomdlalo bangene.
Kindle. Fumana Croque-Melpomene kwi Instagram Croque-Melpomene kwaye uvimba ikopi yayo debut samkele apha: ‘Ukuba baba nako, ngehlobo ngaba iyazoba kwakhona ubomi bakho. ‘Sian Evans yi feisty kanti yaxhobisa aloof divorcee kunye efihlakeleyo. Xa yakhe finyeza ucela wakhe lo mbuzo yena kuthatha ngayo seriously. Zinika phezulu kwayo iityuwadefault colour ekhaya kwaye umsebenzi kwi-Wales, Sian travels yedwa ukuya zilityelwe yembombo ka-lwasemaphandleni France ukuba begin omtsha ubomi a borrowed cottage. Kukho yena meets i-enigmatic sculptor nge penchant kuba ukusebenza kwi-nude. Uza zabo odd encounters ukukhuthaza Sian ukuba admit inyaniso yena sele avoided kuba iminyaka? Kwaye yintoni zoko ukuba yena ingaba
← Unxibelelwano kwi web
Unxibelelwano cell →